बुद्धबार, १७ मंसिर २०७७, सगरमाथा पोष्ट.
बलेवा, बागलुङ जिल्लाको सदरमुकाम बागलुङ बजारबाट भौतिक दूरीका हिसाबले नजिकै रहेको गाउँपालिका हो काठेखोला गाउँपालिका । साविकका सात ओटा गाउँविकास समितिलाई एकीकृत गरेर बनेको गाउँपालिकाको आयस्रोतको मुख्य आधार हो कृषि र पर्यटन । मध्यपहाडी लोकमार्गले फेरो हालेको गाउँपालिकामा नगन्य मात्रामा पक्की सडक छ । वडा अनुसारको विषेशता रहेको गाउँपालिकाका सबै कुना कन्दरामा सडक त पुगेका छन् तर ती सडकहरुको व्यवस्थापनको काम भने बाँकी नै छ ।
खानेपानी, सिँचाइ र कृषि उपजको बजारीकरणमासमेत गाउँपालिकाले बेला बेलामा समस्या भोग्दै आएको छ । यहाँ धार्मिक तथा प्राकृतिक सम्पदाको पहिचान र खेल पर्यटन समेतको विकास शुरु भएको छ र यसबाट यहाँका पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने योजना बनाइएको छ । सांस्कृतिक रुपमा सम्पन्न गाउँपालिकाले विकासको गति लिन थालेको धेरै भएको छैन । सीमित स्रोत साधनको उपयोगले मात्रै पनि जनताले अनुभूत गर्नेगरी काम भए कि भएनन् ? स्थानीय तह गठनको तीन वर्षका उपलब्धि के हुन् ? के अवको बाँकी कार्यकालमा हिजो जनतासँग गरिएका प्रतिबद्धता अनुसारका काम होलान् ? यस्तै विषयमा रासस प्रतिनिधि तारानाथ आचार्यले बागलुङको काठेखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष अमर थापासँग गरेको कुराकानीको अंश ः
जब हामी तीन वर्ष अगाडि आम निर्वाचनमार्फत् निर्वाचित भएर काठेखोलामा आयाँै, त्यसपछिदेखि नै यस पालिकामा समस्याका चाङ पनि थिए र त्यही बीचमा हाम्रा अगाडि अवसरहरु पनि थिए । देश सङ्घीय संरचनामा गइसकेको थियो र हामी स्थानीय सरकारका रुपमा जनताका अगाडि आइसकेका थियौँ । प्रत्येक वडामा कच्ची सडक पुगिसकेको थियो । यसका लागि स्तरोन्नति गर्नु पनि थियो । खानेपानीका केही संरचना बनेका थिए र यसलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्ने थियो । केही वडा उत्पादनको चरणमा पुगेका थिए भने तिनका लागि बजारीकरणको खोजिमा थिए । शिक्षा र स्वास्थ्यका समस्या त्यस्तै थिए । यी समस्याकाबीच जब हामीले पहिलो बजेट प्रस्ताव गरियो यसले केही मात्रामा सहयोग पु¥यायो । हामीले १२ महिना कच्ची सडक भए पनि यातयातका साधन गुडाउन प्रयत्त ग¥यौँ तर प्रकृतिसँग जुध्न सकिएन । केही वडाबाहेक हामी सफल भयौँ । खानेपानीका समस्या समाधानका लागि एक घर एक धाराको कार्याक्रम अगाडि बढाएका छौँ, यसमा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई जोडेर काम तीव्र रुपमा अगाडि बढाएका छौँ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि हामी स्थानीय सरकारको हिसाबले निकै प्रयास गरिरहेका छौँ ।
आमूलपरिर्वतन गर्न नसकिए पनि केही मात्रमा परिर्वतनका परिणाम सतहमा देखिन थालेका छन् । पालिकाभित्रका विद्यालयमा सुशासनका केही अभ्यास हुन थालेका छन् । पठनपाठनमा सुधारका लागि हामीले धेरै प्रयास गरिरहेका छौँ । कक्षा व्यवस्थापनदेखि विद्यालय प्रशासनलाई सुधारका लागि केही सफलता प्राप्त गरेका छाँै । प्रविधिमैत्री बनाउन प्रायः सबै विद्यालयमा इन्टरनेटको व्यवस्थापन गरेका छाँै । अध्यापन कार्यका लागि हामी धेरै प्रयास गरेका छाँै, जस्तैः सघन अनुगमन, नियमित लेखापरीक्षण, विद्यायल सुधार योजना निर्माण जस्ता क्रियाकलाप नियमितरुपमा अगाडि गएका छन् । स्वास्थ्यका क्षेत्रमा हाम्रा स्वास्थ्य चौकीहरुमा व्यापक सुधार गर्नुका साथै केही स्वास्थ्यचौकीमा ल्याबको स्थापन गरी परीक्षणको कार्य अगाडि बढाएका छौँ ।